नगरविकासको आम्दानी दुई गुणा बढाउछु : खनाल – Peacepokhara.com
असार २८ गते पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका प्रकाश खनालले साउन ४ गतेदखि कार्यभार सम्हाल्दैछन् । त्यसपछि समितिलाई पूर्णता दिने उनले बताएका छन् । यसअघिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद वास्तोलाको दुई बर्षे कार्यकाल सकिएपछि नियुक्त भएका खनालको भावि योजना के छन् त ? उनले पिसपोखरा डटकमसंग गरेको कुराकानीको संपादित अंश यस्तो छ ।
पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएकोमा तपाईलाई बधाई छ ।
उपत्यका नगरविकास समितिको हाकिम त हुनुभयो, अव तपाईको काम कस्तो हुन्छन् त ?
सबैभन्दा पहिले त उपत्यका नगर विकास समितिको बारेमा जनमानसमा एउटा नकारात्मक धारणा विकास भएको छ । त्यसमाथि पनि सरकारी निकाय, गैरसरकारी निकाय, प्रशासनिक निकाय, राजनितिक पार्टीहरुको बिचमा पनि समझदारी र समन्वयको अभाब छ । त्यसले गर्दा धेरै कामहरु हुन सकेका छैनन् । मेरो प्रथामिकता यी सवै निकायलाई समन्वयमा राखेर , सबैको सहयोग लिएर अघि बढ्छु । नगरपालिका, जिविस र नगरविकासको क्षेत्राधिकारको प्रश्न पनि छ । सवै निकायको अस्तित्वलाई जोगाएर उपत्यका नगरविकास समितिका कामकारबाहीहरु अघि बढाउने प्रमुख उद्देश्य हो ।
प्रथामिकता निर्धारण गरेर भन्दा तत्काल तपाईले गर्ने काम के के हुन् त ?
तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुको प्रथामिकता निर्धारण गरिनेछ । जस्तै बसपार्क निर्माण, फिर्के अतिक्रमण, फेवाताल प्रदुषण, बेगनासतालमा देखिएको समस्या, साना तालको अस्तित्व जोगाउने कुरा प्रथामिकतामा छन् । जुन जुन कुराहरुले गर्दा पोखरालाई सुन्दर नगरी भनिन्छ आज त्यसकै अस्तित्व संकटमा छ । यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा प्रथामिकतामा आउछन् ।
एउटा एउटा प्लानिङ बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । पोखरा ४० बर्ष अघिको प्लानिङ अनुसार चलेको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आबश्यक छ । क्षेत्रगत रुपमा प्रथामिकता तोकेर बिज्ञकै संलग्नतामा पोखराको आगामी ५० बर्षको गुरुयोजना बनाईनेछ । अहिलेसम्म पोखरामा के गर्ने भन्ने योजना छैन । विना योजना केहि गर्न सकिन्न । योजना विनाको विकास संभव छैन ।
नगरविकासमा जुन हाकिम आउछ , उसको पहिलो प्रथामिकताको नारा वसपार्कनै हुन्छ । तपाईले निर्माण कार्य सुरु गर्नुहोला भन्ने आधार के ?
पैसा नि हामी संग जग्गा पनि छ । तर ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा, सहमति जुटान नसक्दा समस्या आएको हो । दलिय सहमति जुटाउन सकियो भने समस्या छैन । सबै निकाय बिच समन्वय हुनुपर्छ । सुकुम्वासीको कारण नवनेको हो भने विकल्प दिन सक्नुपर्छ । जग्गाको पूर्ण स्वामित्व सहित विकल्प दिएर दलिय सहमति सहित प्रशासनको साथ लिएर निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्छ । पोखरामा सिटी बसपार्क बनाउने हो । लेखनाथमा यसअघि प्रस्तावित क्षेत्रीय वसपार्क ठुलो हुन्छ ।
वसपार्क क्षेत्रमा सुकुम्वासीको नाममा बसेका भनिएका हुकुमवासीलाई हटाउन सकिन्छ ?
मैले पनि यो कुरा कहिकतै सुनेकै हो । यो वारेमा त्यहा के छ बुझेर कानुन अनुसार अघि बढ्छु । अन्य समस्या प्रक्रियागत ढंगले अघि बढ्छ । हटाउनुपर्ने भए हटाईन्छ ।
पछिल्लो समयमा नगरविकासको स्वामित्वमा रहेको फेवा किनारको बसुन्धरा पार्क विवादमा तानिएको छ यसमा के भन्नुहुन्छ नि ?
पोखरामा खुल्ला ठाउ, पार्क अत्यावश्यक छ । यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ मास्नुहुन्न । वसुन्धरा पार्क आवश्यक छ । केवुलकार राख्दाको फाईदा के हो ? पार्कले गरेको वेफाईदा के हो ? कुन प्रक्रियाबाट गएको थाहा छैन । तर स्थानियको सल्लाह विना गरेको भए ठिक होईन । यसवारेमा त्यहाका स्थानियको राय ,सल्लाह, सुझाव लिएर मात्रै अरु काम अघि बढ्छ ।
नगरविकास समिति सञ्चालनको लागि आन्तरिक खर्च जुटाउन पनि धौ धौ छ कर्मचारीले तलव पाएका छैनन् भन्ने गुनासो छ । के हो ?
उपत्यका नगरविकास समितिमा तलव खान नपाउने भन्ने छैन । आम्दानीको स्रोत पर्याप्त छ त्यसको ब्यबस्थापन गर्न नसक्दा समस्या आएको हो । उचित ब्यबस्थापनको खाचो छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा नगरविकासको आम्दानी जति थियो यो आर्थिक बर्षमा दुई गुणा बढाउनेछु । मासिक ६० लाख सम्म आम्दनी हुने श्रोत देखिन्छ ।
तपाईले यी काम गर्छु भन्दा भन्दै चुनौति चाँही के छ ? सहज छ त काम गर्न ?
सहज छैन । कसैले केहि गुन्जायस राख्छ भने खबरदारी गर्नुपर्छ । साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ नहुने भन्ने केहि छैन ।